Fitodika zoina Info. About. What's This?
Fameno toe-javatra toerana
ⓘ Fitodika zoina
Ny fitodika fitaovana na dia fitodika asahonny endriky ny matoanteny ao aminny fehezanteny izay ahitana lazaina manondro ny zavatra ampiasaina hanatanterahana ny asa. Ny lazaina aminny fehezanteny mitodika aminny fitaovana dia mitana ny anjara asa fameno fitaovana ao aminny fehezanteny mitodika aminny lazaina mpanao. Ao aminny fiteny malagasy dia matetika ny ahitana matoanteny aman-tovona - ana ny fehezanteny mitodika aminny lazaina fitaovana, nefa misy ny fehezanteny ahitana matoanteny misy tsirin-teny sara-droa. Ohatra: Akapan ny ankizy ny hazo ny antsy. fehezanteny mitodika aminny fitao ...
Ny fitodika iharana na fitodika zoina iharana ao aminny fitsipiteny sy haiteny malagasy araka anjara asa dia ny fitodiky ny fehezanteny ahitana vaniny roa fara-fahakeliny ka ny matoanteny dia misy tovana - ina, -ana, na tsirinteny sara-droa ha-. - ina, an-. - ina, anka-. -ina, na tovona voa -, na tsofoka -in-.
Ny fameno zoina dia anjara asa fameno ao aminny fehezanteny izay milaza ny olona na biby na zavatra hafa iantefanny asa tanterahinny olona na biby na zavatra hafa tondroinny teny atao lazaina. Aminny ankapobeny dia mampiavaka ny fameno zoina ny tsy fahafahana manafoana azy avy ao aminny fehezanteny na mamindra toerana azy, tsy tahaka ny fameno mpamari-toe-javatra. Misy ny mpanao fitsipiteny mampitovy ny fameno zoina aminny fameno iharana nefa misy ireo izay tsy manafangaro izany fa manao ny fameno iharana ho karazana iray aminny fameno zoina. Ny fameno zoina dia famenonny matoanteny fa ny ...
Ny fitodika mpifanao na fitodika mitoina dia fitodiky ny fehezanteny izay ahitana matoanteny manana endrika manokana tsy mitovy aminny anny matoanteninny mpanao sady misy lazaina izay sady mpanao no zoina na toe-javatra.
Ny fameno mpamari-toe-javatra dia anjara asa fameno ao aminny fehezankevitra na ny fehezanteny izay manondro ny "toe-javatra" izay matetika azo afindrandrafindra toerana sady azo foanana, nefa tsy manakorontana ny rafitry ny fehezanteny izany, ka ireo fepetra roa farany ireo matetika no tena iavahany aminny fameno zoina. Aminny fiteny sasany dia matetika ialohavana mpampiankin-teny ny fameno mpamari-toejavatra nefa tsy tokony hafangaro aminny fameno zoina tsy mivantana. Noho izany rehetra izany, ny teny na andian-teny mitana ny anjara asa fameno mpamari-toe-javatra ao aminny fiteny iray di ...
Ny fameno mpamari-toe-javatra na fameno mpamari-toe-javatra milaza toerana dia anjara asa fameno mpamari-toe-javatra izay manondro ny toerana ahatanterahana ny asa na ny toetra ambaranny enti-milaza. Aminny fiteny sasany dia matetika ialohavana mpampiankin-teny ny teny mitana ny anjara asa fameno toe-javatra toerana nefa tsy tokony hafangaro aminny fameno zoina tsy mivantana. Ao aminny fitsipiteny mahazatra dia tsy misy fanavahana ny fameno mpamari-toe-javatra toerana famenonny fehezanteny, azo afidrafindra sy/na foanana sy ny fameno zoina izay milaza toerana koa famenonny matoanteny, tsy ...
Ao aminny haiteny sy ny fitsipiteny, ny mpanao dia anjara asa ara-kevitry ny teny manondro ny olona na zavatra manatanteraka ny asa ambaranny matoanteny ao aminny fehezanteny na fehezankevitra. Tsy afangaro aminny lazaina ny mpanao, satria ny lazaina dia mety ho ny olona na zavatra iharanny asa, na tompon-toetra, sns; ny mpanao koa dia tsy voatery hisahana ny anjara asa lazaina fa mety ho fameno, ka atao hoe fameno mpanao. Ohatra, ao aminny fehezanteny hoe Mihinan-kena ny alika sy Haninny alika ny hena dia misahana anjara asa ara-keviteny mpanao ny teny hoe alika, nefa mitana ny anjara asa ...
Ny toe-javatra na mpamari-toe-javatra, aminny fitsipiteny na ny haiteny dia ny teny na andian-teny izay misahana anjara asa ara-keviteny tsy tena ilainny matoanteny hameno ny heviny, tsy tahaka ny zoina. Aminny fiteny maro dia misahana ny anjara asa fameno izy ka lazaina hoe fameno mpamari-toe-javatra, nefa aminny teny sasany dia afaka misahana anjara asa lazaina izy. Aminny fiteny malagasy dia misahana ny tsinjara asa toe-javatra ny teny hoe eo an-tokontany ao aminny fehezanteny hoe Milalao baolina eo an-tokontany ny ankizy sy Ilalaovanny ankizy baolina ny eo an-tokontany: ao aminny fehez ...
Ny fameno dia anjara asanny teny izay maneho ny fiankinanio teny io aminny teny na andian-teny iray hafa ao anaty fehezanteny. Ny andian-teny resahina eto dia mety ho tarika na fehezankevitra. Misy karazany maro, arakaraka ny hevitrilay fiankinana na ny sokajin-teny iankinanilay teny, ny fameno. Mety hisy mpampiankina na tsia mampifadray ireo teny na andian-teny mifameno ireo.
Ny fitodika zoina dia fitodiky ny fehezanteny ahitana teny na tarika misahana ny anjara asa lazaina raha tokony ho fameno zoina, sady matetika ahitana matoanteny na aminny fiendrika mifanentana aminio fitodika io, arakaraka ny fiteny. Aminny ankapobeny, ao aminny fiteny iray, dia tsy tokana ny fitodika zoina fa maro. Mifamaly aminny fitodika zoina ny fitodika toe-javatra, ny fitodika mpanao, ny fitodika mpampanao, ny fitodika mpifanao, sns.
1. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy
Ny fitodika zoina fitaovana
Tsy afangaro ny fitodika zoina fitaovana sy ny fitodika zoina alalana.
Akapoky ny ankizy ny omby ny kibay. = Ikapohan ny ankizy ny omby ny kibay.
Ny fitodika zoina alalana
Anenjehan ny olona lambo ny alika.
Ny fitodika zoina tanty
Tsy afangaro ny fitodika zoina tanty sy ny fitodika zoina fitaovana.
Rosoan ny tompon-trano sakafo ny olona nasaina.
Ny fitodika zoina tolorana
Tsy afangaro ny fitodika zoina tanty sy ny fitodika zoina tolorana.
Ivarotan -janako ny fiara ilay mpanan-karena.
Ny fitodika iharana sy ny fitodika atao
Ny fitodika iharana sy ny fitodika atao dia mifangaro ao aminny fitodika zoina iharana.
Kapohinan ny ankizy ny omby. iharana
Atoraka ny vato. atao
Ny fitodika fitaovana
Ny fitodika fitaovana dia mitsinjara ho fitodika zoina fitaovana sy fitodika zoina alalana.
Akapoky ny ankizy ny omby ny kibay.
1.1. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika zoina fitaovana
1.2. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika zoina alalana
1.3. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika zoina tanty
1.4. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika zoina tolorana
1.5. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika iharana sy ny fitodika atao
1.6. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika fitaovana
1.7. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika mpandray
Ny fitodika mpandray dia mitsinjara ho fitodika zoina tololorana sy fitodika tanty, raha ny heviteny ihany no ifotorana.
Rosoan ny tomoon-trano sakafo ny olona nasaina.
1.8. Ny fitodika zoina ao aminny fiteny malagasy Ny fitodika mpamari-toe-javatra toerana
Ny fitodika mpamari-toe-javatra ilay milaza toerana dia mizara aminny fitodika toe-javatra toerana famenonny fehezeanteny sy fitodika zoina toerana famenonny entimilaza.
Ijanonan ny fiara ny eo amoron-dalana.
Wikipedia: Fitodika zoina